Iyo Kanganiso Code 0x80240438 zvinogona kuitika kune ese ari maviri Windows Kugadziridza uye Chitoro cheMicrosoft pa Windows 10. Izvi zvinodaro nekuti nzira yekuendesa kune ese ari maviri inoenderana uye yakajairika. Ichi ndicho chikonzero nei vazhinji Windows Kwidziridzwa uye Microsoft Chitoro kodhi makodhi akafanana. Kugadzirisa zvese zviri nyore, uye nzira zhinji dzakafanana. Tichave tichikurukura izvi zvigadziriso muchinyorwa chino nhasi.
Paive paine matambudziko ekuisa zvinyorwa, asi isu tichaedzazve gare gare. Kana iwe ukaramba uchiona izvi uye uchida kutsvaga webhu kana kubata tsigiro yeruzivo, izvi zvinogona kubatsira - (0x80240438).
Kanganiso 0x80240438 ye Windows Dzidzo & Chitoro cheMicrosoft
Kana ukatarisana nenyaya iyi, unofanirwa kutarisa zvinotevera:
Run the the Windows Gadziridza Matambudziko.
Dzingai Antivirus yako kana Firewall.
Dzivirira Kubvumirana kweProxy.
Shandura iyo Bvisa mukana wekushandisa zvese Windows Gadziridza maficha Pfungwa.
Dzorerazve iyo Windows Gadziridza maforodha.
Dhawunirodha bhuku racho.
1] Fambai Windows Gadziridza Matambudziko
Unogona kumhanya Windows Gadziridza Troubleshooter uyewo Microsoft Online Windows Gadziridza Troubleshooter uye chengetera kana izvozvo zviri rubatsiro mukugadzirisa chero dambudziko rako.
2] Dzingai Antivirus yako kana Firewall
Iwe unogona kanguva disable Windows Defender iyo yakaiswa kunze kwebhokisi pane yako Windows 10 kombiyuta. Iwe unogona zvakare dzima yako Windows firewall pakombiyuta yako uye chengetedza kana izvozvo zvinogadzirisa zvikanganiso zvauri kusangana nazvo. Kana uri kushandisa 3rd-party security software, disable them uye ona.
3] Dzivirira Proxy Ungano
Tanga nekunyora mukati Internet Options muCortana Tsvaga Bhokisi. Dzvanya pane yakakodzera mhedzisiro.
Iye zvino famba uchienda kune tab inonzi inonzi Connections.
Pasi pechikamu chakanyorwa se Local Area Network (LAN). Dzvanya pabhokisi rinotaura LAN Settings.
Pasi pechikamu che Proxy Server, sarudzai chisarudzo icho chakanyorwa se Shandisa proxy server yeLAN yako (Izvi zvisarudzo hazvizoshandiswi kuvhara-up kana kuWPN).
Click on OK uyezve Root the computer kuti shanduko dzitore kushanda.
4] Shandura iyo Bvisa mukana wekushandisa zvese Windows Gadziridza maficha urongwa
Hit the WINKEY + R bhokisi rekubatanidza kuti utange Run operative, tanga mu gpedit.msc uye hit Enter. Kana imwe kambani Group Policy Editor inotanga, famba nenzira inotevera-
Kugadziridza kweMushandisi> Matempuru Ekutungamira> Windows Zvikamu> Windows Update
Iye zvino, pane kurudyi kwepanepa uye kabha kaviri Bvisa Kuwana Kuti Ushandise Zvese Windows Gadziridza Zvimiro uye kuisa bhodhi redhiyo Kwete Kugadziriswa for it.
Izvi zvinokutendera kuti ubvise kupinda Windows Kwidziridza. Kana iwe uchigonesa iyi seti, zvese Windows Gadziridza maficha anobviswa. Izvi zvinosanganisira kuvhara mukana kune iyo Windows Gadziridza Webhusaiti pa http: //windowsupdate.microsoft.com, kubva ku Windows Gadziridza hyperlink pane Start menyu, uye zvakare pane iyo Menyu menyu muInternet Explorer Windows otomatiki kugadzirisa zvakare akaremara; iwe hauzomboziviswa nezvazvo uye haugamuchire zvinotsoropodza kubva Windows Kwidziridza. Kugadzika uku kunodzivirira maneja wedhijitori kubva otomatiki kuisa madhiraivhu ekutyaira kubva ku Windows Gadziridza Webhusaiti.
Kana iwe ukagonesa iwe unokwanisa kugadzirisa imwe yekutevera sarudzo sarudzo:
0 = Usaratidze chero chiziviso - Iyi seti ichabvisa kuwana kwese Windows Gadziridza maficha, uye hapana Notices dzicharatidzwa.
1 = Ratidza kutangazve inodikanwa zviziviso - Uku kurongedza kunoratidza zviziviso nezve restarts inodiwa kuti upedze kuisirwa.
Izvi zvaizogadzirisa nyaya dzako kana ichi ndicho chikonzero.
Buda muGroup Policy Editor uye wozotorazve kombiyuta yako kuitira kuti zvigadziriswe zviitike.
[Mufananidzo uri 5] Gadzirisazve iyo Windows Gadziridza maforodha
Iwe unoda kubvisa zviri mukati SoftwareDistribution folda & reset the Catroot2 folder.
6] Dhaunirodha Bhuku reMabasa
Kana ichinge isiri iyo inoshandiswa, uye inongowanikwa chete, iwe unogona manyore kurodha pasi uye kumisikidza iyo Windows Update. Kuti uwane kuti zvinyorwa zvipi zvakakundikana kutevera matanho: